Debreate: ny fomba famoronana mora fonosana DEB | Avy amin'ny Linux
Debreate: ny fomba hamoronana fonosana DEB mora foana
Indraindray isika misintona rakitra avy amin'ny tamba-jotra hiasa amin'ny rafitray ary hitantsika fa ho mora kokoa sy ahazoana aina kokoa ho antsika ny mamadika azy ireo ho fonosana .deb ary hampiditra azy ireo ao amin'ny kitapom-bolanay eo an-toerana. Ohatra, rakibolana ho an'ny Stardict, borosy na gradients ho an'ny gimp, wallpaper, andiana tutorials, tranokala iray feno hifehezana azy ivelan'ny kaody, kaody loharanom-baovao avy amin'ny antoko fahatelo na, toa ahy, ny fandaharan'asanao manokana!
Ireo mpandahatra programa vaovao dia hahita fa mahasoa ity rindranasa ity. Misy torolàlana momba ny fanamboarana fonosana avy amin'ny kaody loharano, saingy amin'ny ankapobeny dia sarotra sy sarotra takarina izy ireo. Afaka maharitra amintsika rehetra ny fahafantarana ny fomba fiasan'ny dpkg amin'ny console.
Debreate dia programa iray ahafahantsika manao an'io amin'ny fomba tena tsotra. Ireto sary manaraka ireto dia milazalaza tsikelikely amin'ny famoronana fonosana .deb misy borosy, paleta ary lamina ho an'ny Gimp. Ireo rakitra ireo dia voakambana ao anaty lahatahiry tsirairay avy, ao anaty lahatahiry avokoa ireo telo ireo gimp-extra ao amin'ny rafitray. Ny hataon'ny programa dia ny manampy ny atin'ny fampirimana borosy mankany amin'ny fampirimana /usr/share/gimp/2.0/brus, sns.
Na izany na tsy izany, avelako ireo sary manazava ny tena. Tsy nahita boky torolàlana momba ny debreate aho, saingy amin'ny lojika sy saina kely fotsiny dia mora ny mamorona karazana fonosana tena samihafa ho an'ny toerana anaovantsika manokana. Debreate dia manana interface interface intuitive. Ny endriny rehetra dia voalamina tsara, manampy ny zanak'olombelona mpiara-monina aminy hamorona ny DEB tsy misy manahirana. Vantany vao mameno ny angona ilaina rehetra ianao dia mamorona lahatahiry generika i Debreate ary mandika ny fisie ilaina rehetra ao. Avy eo mihazakazaha "dpkg -b" hananganana ny fonosana DEB ao anaty fampirimana voafantina.
Debreate dia tsy noforonina mba "tsy hianatra" na "tsy hianatra" baiko hampionona. Ny famoahana amin'ny ho avy dia hanisy antontan-taratasy amin'ny antsipiriany momba ny fomba famoronana tanana fonosana DEB, ao anatin'izany ny fomba famoronana ny hazo lahatahiry sy ny fifehezana rakitra. Dinihina ihany koa ny fanohanana ny fonosana RPM.
Hita ao | Debreate & Ubumedia
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Debreate: ny fomba hamoronana fonosana DEB mora foana
Raha manana tranomboky toa ny OpenCV ny programa nataoko, ahoana no hanondroako azy amin'ny Debreate?
LexArias dia hoy izy:
Araka ny hitanao amin'ny sary faharoa, izay misy azy hoe "Miankina" amin'io sehatra io no anononanao ny fiankinan-doha amin'ny programa nataonao.
Raha toa ka mila manampy tahiry fanampiny ianao dia mila mandinika ny vakizoro Script ary hahitana raha misy ny mety hamoronana script mialoha fametrahana izay ampidirinao ny repository, havaozina ary apetrakao ny fiankinan-doha, tokony ho azonao atao fotsiny ny maka ny deb an'ny ny fiankinan-doha.
Tsy mbola nampiasa an'ity app ity aho.
Valiny amin'i LexArias
Dia: safidy maimaim-poana amin'ny Microsoft Visio
Open-PC, manisa "maimaimpoana" tanteraka